Date My Pet » Common efatra Relationship zava-manahirana
Last nohavaozina: Jan. 16 2021 | 3 min namaky
Ny fitiavana dia tsy mampino izany zavatra! Izany no antony mahatonga antsika mandany ny antsasaky ny fiainantsika miezaka mba hitady ny iray. Fa rehefa manao izany isika, dia ny antsasaky ny tantara ihany. Izahay tsy maintsy manana ny olana eny an-dalana eo amin'ny fifandraisana rehetra, fa misy fomba hamahana ireo miezaka matetika ny rehetra ny olana izay miatrika. Tadidio fa amin'ny faran'ny andro ianao sy ny fiaraha-miasa raha tsy misy olana ireo dia lehibe noho izay anananao miara-dia tena manana zavatra manokana. Miady mba hihazona izany teo. Ity ny olana fahita efatra ny olona miatrika ny fifandraisana sy ny fomba mety hamaha azy ireo.
Fifandraisana angamba no tena fahita fifandraisana olana misy. Misy olana maro izay mety tsy hitranga ao amin'ny fifandraisana misy olona roa ireo dia eo amin'ny pejy ihany ampitahaina amin'ny olona izay tsy. Fifandraisana sakana hanakanana antsika tsy manakana ny toe-javatra tsy hahazo manahirana lehibe kokoa noho ny ho tena toetrany. Raha toa ka ianao sy ny namanao hahita fa ireo sakana misy eo amin'ny fifandraisanareo amin'ny fomba hanatona izany amin'ny mivoha, manao ny marina sy tsy hitsara, am-po. Ny ankamaroan 'ny afo izay nanampy ny solika tao amin'ny toe-javatra ireo dia avy amin'ny tsy fahampian'ny fahalalana eo amin'ny olona roa, ary noho izany ny fanaovana didim-pitsarana ao izany olona izany raha tsy mihaino ny lafiny ny tantara. Miezaha mipetraka rehefa hiresaka, lahateny, lahateny.
Zavatra te samy hafa
Na dia zavatra kely toy ny hoe aiza no mivoaka, izay hihinana, sns … na olana lehibe kokoa toy izay ny ho velona, na hiara-miaina, na manambady, na ny ankizy na ny manana na ny tsy tiany ny zavatra hafa dia fifandraisana lehibe olana. Ary izany dia hitranga amin'ny fomba iray na hafa, satria na dia iray aza isika raha miaraka isika fa olona manokana eo amin'ny fiainantsika isika, dia mbola olona amin 'ny eritreritra sy ny drafitra dingan'ny ny fomba fiainantsika isika dia mahita fihodinana avy. Izany mahatonga ny disadisa satria mahita azy ho toy ny fanesorana izay tiantsika sy foana ao isika raha mora sosotra izy ireo noho izany. Inona no tokony atao dia hiresaka indray fa mila ihany koa hanaja ny izay tadiaviny, e.g. be dia be ny olona te-hanambady hieritreritra fa ny fanambadiana dia ambony kokoa noho ny miara-mipetraka tsara toerana ny olona izay te hiara-miaina tsy mahita zavatra toy izany. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, zavatra hafa tianao, tsy “tsara kokoa” ny zavatra, ary izay tokony hotsarovana na raha tsy izany ny olona mahatsapa ianao manala na nampahory ny fomba eritreretiny fa mety. Marimaritra iraisana ihany koa fototra eto. Mila izany eo amin'ny fifandraisana rehetra. Antoka fotsiny izany vola mitovy ny nanaiky lembenana nanao tamin'ny tsirairay ny faritra.
Ny vola no fototry ny ratsy rehetra toy ny hoe izy ireo sy ny fifandraisana mety ho poizina izay mitana labiera. Miaina ao anatin'ny fotoana sy ny asa recessional tsy misy matetika. Ny olona sahirana, ary mety hanisy disadisa eo amin'ny fifandraisana izay Ara-dalàna. Inona no ilainao hatao dia mamporisika ny hafa, mampiseho samy mino ianareo samy izy sy izay niara-dia afaka mivoaka ny lafiny hafa, satria ianao amin'ny farany dia. Nandritra izany fotoana izany fa miady hevitra ny olona tianao indrindra eto amin'izao tontolo izao dia tsy hamaha na inona na inona. Raha toa ka na inona na inona afa-tsy izany dia manao zavatra iray tapitrisa in-ratsy.
Ny toaka ny Fiankinandoha & Ketraka
Ireo no olana sarotra ho an'ny olona mba hahafantatra ny tokony hatao ao rehefa mijery ny mpiara-miasa amin'ny kivy toy izany ebbs. Amin'ny fiainana dia mety loatra ho an'ny olona rehetra sy amin'ny fomba samihafa ny olona sasany hiatrika tsara kokoa noho ny hafa. Inona no tokony atao dia ho eo ho azy ireo, mampiseho izy ireo manana finoana izy ireo ny mijery amin 'ny alalan ary aza hoe fanamarihana eny an-tampon-dohanao, izay hahatonga azy ireo bebe kokoa noho izy efa nidina ireo.